Jiil cusub oo ka soo dhex muuqan doona cayaaraha fudud ee adduunka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jiil cusub oo ka soo dhex muuqan doona cayaaraha fudud ee adduunka
La daabacay fredag 9 augusti 2013 kl 09.25
Sabtidaan foodda nagu soo haysa ayey cayaaraha fudud ee adduunku ka bilaaban doonaan magaala-madaxda dalka Ruushka ee Mooskow. Iswiidhen waxaa cayaarahaas uga qaybgalaya 20 qof oo ay hadda badankood halkaask u sugan yihiin. Niyadda kooxda iswiidhishku aad ayey u sarreysaa, waxaana lagu rajo weyn yahay in ay guulo ka soo hoyaan tartankaas cayaaraha adduunka maadaana ay cayaaryahanada iswiidhishku wacdaro muujiyeen gu’gii la soo dhaafay, ayuu yiri Bengt Skött oo ah weriyaha idaacadda Radiosporten Mooskow u jooga.
- Niyadda kooxdu aad ayey u sarreysaa in kastoo qaar ka mid ahi ay dareensan yihiin in ay guul ka gaaraan tartanka cayaaraha halkaas ka dhici doona. Intii xilliga kulaylaha lagu jirey kuwo badan oo ka mid ah kooxda iswiidhishku muujiyeen natiijooyin wanaagsan. Waxaana lagu tiriyaa in ay adduunka kaga jiraan kaalinta tobnaad ama laba iyo tobnaad, ayuu Bengt Skött.
Tartanka cayaaraha fudud ee adduunka waxaa loo qabtaa sannad dhaaf, mar walbana waxaa la qabtaa sannad kinsi ah. Tartanka cayaaraha fudud ee adduunka wuxuu noqonayaa tartanka dunida ugu weyn marka la soo tago Cayaaraha Olimbiga.Tartankii ugu horreeyey ee cayaaraha fudud ee adduunka oo wadajir ah waxaa la qabtay sannadkii 1983, waxaana lagu qabtay magaalada Helsinki ee dalka Finland. Xilligaas wixii ka horreeyey waxaa loo qaban jirey qayb qayb. Iswiidhen ayaa dhammaan tartanadaas ka soo qaybgashay, kana gaartay natiijooyin kala duwan. Waxaa la xusuustaa Partik Sjöberg oo afar sano kadib Iswiidhen u qaaday shan biladood: laba dahab ah, mid qalin ah iyo labo naxaas ah.